Cali Guudlaawe oo dadaal ugu jira sidii uu ku tagi lahaa Hiiraan | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa dadaal dheer ugu jira sidii uu ku tagi lahaa gobolka Hiiraan, isagoo la kulmay xildhibaanada kasoo jeeda Hiiraan ee Golaha Shacabka BJFS ku matala.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Guudlaawe oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa wada dadaallo uu ku doonayo sidii uu xal waara uga gaari lahaa arrimaha murugsan ee ka aloosan dowlad goboleekda Hirshabeelle ee isugu jira Amniga iyo qolyaha mucaaradka ku ah ee kasoo hor jeeda jiritaanka nidaamka Hirshabeelle ee uu madaxda ka yahay.
Xalay ayuu ugu yeertay hoyga uu ka daggan yahay magaalada muqdisho xildhibaanda deegaan doorashadoodu tahay Hiiraan ee ka tirsan Golaha Shacabka BJFS, waxa uuna kala hadlay arrimo ay kamid yihiin sidii xal looga gaari lahaa dhibaatada kooxaha hubeysan ay ka wadaan gobolka Hiiraan, iyadoo Jabhad isku magacowday Xaq-u-dirir ay ka dillaacday duleedka magaalada Baladweyne taasoo ka biya diidsan jiritaanka nidaamka Hirshabelle.
Madaxweyne Cali Guudlaawe oo la doortay dabayaaqadii sanadkii ina dhaafay ayaan loo sameyn xaflad Caleema saar sababo la xiriira doorashadiisa oo muran badan dhalisay iyo isagoo ku dhiirran waayay inuu tago magaalada Baladweyne oo ay ka dhaceen bannaan baxyo waa weyn oo looga soo hor jeedo imaashiyihiisa. Waxaana uu booqashadiisii ugu horeysay ku yimid magaalada Muqdisho halkaasoo uu ka wado qorshihii uu ku tagi lahaa Hiiraan.